कसरी चिन्ने ब्राण्डेड लुगा? यस्ता छन् ४ तरिका - Everest Dainik - News from Nepal
कसरी चिन्ने ब्राण्डेड लुगा? यस्ता छन् ४ तरिका
यस्तोमा कुन नक्कली र कुन सक्कली कपडा हो भनेर छुट्टयाउन गाह्रो हुने गर्छ। तर यस्ता कपडाहरु चिन्नका लागि थोरै विचार पुर्‍याए मात्र पनि पुग्छ। किनकि ब्राण्डेड कपडाहरुको आफ्नो छुट्टै पहिचान हुन्छ जसले गर्दा कुन कपडाहरु ब्राण्डेड हुन् भनेर सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ।
ब्राण्डेड कपडाको भित्री भाग निकै राम्रो गुणस्तरको हुन्छ। जस्तै कोटको भित्री कपडा, जिन्स प्यान्टको खल्तीको कपडा राम्रो गुणस्तरको हुन्छ र सिलाई पनि मजबुत र राम्रो हुन्छ। ब्राण्डेड कपडामा बटन, जिपर आदी राम्रो गुणस्तरको लगाइएको हुन्छ।
ब्राण्डेड कपडामा सिलाई सिधा हुन्छ, सबै कपडामा सिलाई बराबर र एकनाशको हुन्छ। यदि कपडा मोटो छ भने डबल सिलाई गरिएको हुन्छ र धागोको रङ्गमा पनि ध्यान दिइएको हुन्छ।
ब्रान्डेड कपडा अलिकति महँगो भए पनि गुणस्तरीय हुन्छन्। बजारमा ब्रान्डका नाममा बेचिने लुगा नक्कली (कपी) पनि हुन सक्छन्। ब्राण्डेड कपडा यसरी चिन्न सकिन्छः
–स्टिचिङमा ध्यान दिएर ब्राण्डेड कपडा चिन्न सकिन्छ। ब्रान्डेड कपडाको स्टिचिङ सीधा, सफा र समान हुन्छ। स्टिचिङमा धागो पनि एकनासे प्रयोग गरिएको हुन्छ।
–ब्रान्डेड कपडाको जिप वा चेन पनि राम्रो गुणस्तरको हुन्छ। ब्रान्डेड कपडाको पहिचान गर्न लुगामा रहेको चेन खोल्ने र बन्द गर्ने गर्नुपर्छ। यसो गरेर कपडा ब्रान्डेड भएको अथवा कपी भएको थाहा पाउन सकिन्छ। धेरैजसो ब्रान्डेड कपडाको चेनमा ब्रान्डको नाम लेखिएको हुन्छ।
–बटनबाट पनि पहिरन ब्रान्डेड या कपी भएको थाहा पाउन सकिन्छ। बटनमुनि रहेको पेचमा ब्रान्डको नाम लेखिएको छ भने त्यो सक्कली हो। ब्रान्डेड कपडामा ब्रान्डको नाम लेखिएको हुन्छ भने कपी कपडामा साधारण बटन हुन्छ।
–लोगोबाट पनि ब्रान्डेड कपडाको पहिचान गर्न सकिन्छ।
ट्याग्स: ब्राण्डेड कपडा